13 / 09 / 2019 | RayHaber
Ụbọchị: 13 September 2019
Baku Kapikule High Speed ​​Railway Construction iji bido n'ọdịnihu dị nso
Turkey, Njem Transport Service nke Accessibility Project Erzurum Transportation na Infrastructure Minister Mehmet biaruru obodo isonye na Onodi Cahit Turhan, Erzurum gaa Gọvanọ Office, na-zubere ọsọ ụgbọ okporo ígwè n'ebe oru rụrụ n'etiti Baku-Kapıkule [More ...]
Kop na Broken Tunnels ka emepe emepe na 2021
Accessibility nke Njem Transport Service Project Erzurum na Turkey ịga Onodi biaruru obodo Transportation na Infrastructure Minister Mehmet Cahit Turhan, gara Erzurum Governor. N'oge nleta Gọvanọ, Gọvanọ Okay Memiş na Gọvanọ [More ...]
Isi mesie ike na 'nnweta' na 'nnweta' n'aka Onye isi ala Sekmen
Onye isi obodo nke Erzurum Obodo mepere emepe Mehmet Sekmen kwuru "Anyị ga - eme Erzurum ịbụ obodo ana - anabata ya na obodo nnabata". Turkey na co-kwụrụ ụgwọ site EU, ndị Ministry of Transportation na Infrastructure [More ...]
Uru ụgbọ njem Erzurum dị n'okporo ụzọ Silk Mere eme
Mehmet Cahit Turhan, Mịnịsta nke Transportgbọ njem na akụrụngwa, gara Mehmet Sekmen, onye isi obodo nke Erzurum Metropolitan Obodo. Minista Turhan, ọhụụ Erzurum banyere njem, usoro mmepe obodo na-aga n'ihu n'akụkụ niile. Turkey na [More ...]
Ihe ọghọm ụgbọ oloko na Kongo, opekata mpe ndị 50 nwụrụ
Dabere na akụkọ mbụ, opekata mpe ndị 50 nwụrụ n'ihe ọghọm nke mere n'ụtụtụ mgbe ụgbọ oloko ahụ merụrụ na mpaghara Tanganyika na ndịda ndịda ọwụwa anyanwụ nke Democratic Republic of Congo. Reuters na-akọchite Minista na-elekọta mmadụ [More ...]
Egosiputara Centennial Vezurum na Erzurum Gar Museum Light Light on History
Thelọ ihe ngosi nka, nke nwere ihe mgbe ochie ochie na Erzurum, mere ka a mata akụkọ banyere ụzọ ụgbọ okporo ígwè. A na-egosi ihe karịrị 300 ngwaọrụ n'ụlọ ebe a na-edebe ihe ngosi Akụkụ kachasị dị mkpa bụ 101 loomotive Steam kwa afọ… Ekwentị nwere magneto, oriọna gas, cymbals. [More ...]
Edinam emi Idibulkart okodude ke Nditọ Utịt M Cankemeke Ndikan Ufọkn̄wed
Ọnụ ego ụgbọ njem esetịpụrụ malitere site na ntinye nke İBB President Ekrem İmamoğlu agbasawanye. Ndị otu IMM kpebiri na ụmụ akwụkwọ ahụ na-agaghị ebili na ngalaba na nyocha nke mahadum na ndị nkuzi na-arụ ọrụ n'okpuru nkwekọrịta na Ministry of Education ga-erite uru na kaadị ahụ dị ala. [More ...]
Njem Owl iji ruo na Metro ruo Tram na Izmir
Obodo İzmir mepere emepe, nke bidoro ọrụ ụgbọ njem ọha na elekere n'abalị nke iji ụgbọ ikwiikwii na-aga ugbu a, na-ewebata otu ụzọ ma na-ewebata ọrụ abalị kwa abalị na metro na tram. Fraịde na [More ...]
A họpụtara Hamdi Alper Kolukısa dị ka onye isi Director nke IETT
A họpụtara Hamdi Alper Kolukısa ka ọ bụrụ onye njikwa ọhụụ nke ISTANBUL Electric Tram na Operator (IETT). Ahmet Bağış nọchiri Hamdi Alper Kolukısa ka ọ bụrụ onye njikwa ọhụụ nke Istanbul Electric Tram na Operator (IETT). [More ...]
Taa na akụkọ ihe mere eme: 13 September 1993 Afyon 7. region
Taa na History 13 September 1993 Afyon 7. A na-emeghe ngalaba nchịkwa mpaghara.